WAA MAXAY FARAN? | ALC Ozaukee
Maxaad ugu deeqdaa?
Maalgalinta maaliyadeed ee Xarunta Wax Akhrinta Dadka Waaweyn ee Gobolka Ozaukee waa mid ka mid ah go'aamada ugu wanaagsan ee aad sameyn karto. Markaad hadiyad u sameyso ALC, adiga:
Keydi lacagta dawlada
U oggolow qofka inuu helo madax-bannaanida dhaqaalaha
U dhis bulshada maxaa yeelay akhris-qoraalka oo hagaagaya ayaa ka caawiya shakhsiyaadka inay helaan kalsooni isla markaana ay ku sii biiraan bulshada dhexdeeda.
Hubso shaqaale aqoon leh, la isku halleyn karo oo hufan
Deganaansho siin qoysaska
Sababta ay u shaqeyso Xarunta Xarunta Wax Akhrinta Dadka Waaweyn
Gobolka Ozaukee: 3,500 qof ma haystaan ​​diblooma dugsiga sare. 17,000 oo dad ah ayaa leh “hanti iyo dakhli kooban.” Iyo 5,300 oo caruur ah ayaa ku nool saboolnimo.
Ardaydu waxay u yimaadaan ALC umeerin hal-qof ah si loo wanaajiyo xirfadahooda waxbarasho. Qaarkoodu waa Bartayaasha Luuqadda Ingiriiska, qaar waxay raadinayaan dhalashada, kuwa kalena waxay leeyihiin yoolal ay ku hormariyaan aqrintooda, qorista, kuhadalka, fahamka, naxwaha iyo xirfadaha nolosha. Barashada xirfadahan waxay u ogolaaneysaa ardayda inay noqdaan kuwa shaqeeya oo badan, xiriir wanaagsan bulshada dhexmara oo horumariya kalsoonida. Shaqaalaha leh xirfadaha aqriska sareeya waxay kasbadaan wax badan, waxayna u badan tahay inay shaqo la 'yihiin, waxay leeyihiin fursado badan dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, waxay aad ugu dhow yihiin inay helaan shaqo waqti-buuxa, waxayna aad ugu dhaw yihiin inay helaan tababar dheeraad ah.
Sidee loo isticmaalaa tabarucahayga?
Xarunta Akhriska Dadka Waaweyn ee Gobolka Ozaukee waxay ku mahadsan tahay ku-deeq iyo tabaruc kasta oo aan helno. Doolar kasta waxaa loo adeegsadaa si caqli gal ah, iyadoo inta badan tabarucaadka loo adeegsado in lagu taageero barnaamijyadeena si togan u saameeya ardayda waaweyn ee Gobolka Ozaukee County.
ALC waxay wadashaqayn gaar ah la leedahay Kaniisadda Grace Lutheran oo bixisa hadiyado noocyo badan ah oo xafiis, goob kulan, iyo tasiilaad u oggolaanaya hadiyaddaada inay si dheeraad ah ugu socoto taageerida hadafkeena.
Kheyraadka fasalka iyo Manhajka
Waa muhiim in aan siino ardaydeena iyo tababarayaasha kheyraadka ay ugu baahan yihiin inay ku guuleystaan oo ay ku jiraan manhaj casriyeysan, maaddooyinka wax lagu baro, iyo ilaha internetka.
Waxaan u isticmaalnaa TABE®, sheyga qiimeynta tacliinta aasaasiga ah ee ugu weyn ee lagu kalsoonaan karo ee waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn. Imtixaanka TABE wuxuu bixiyaa aasaas adag oo wax ku ool ah oo lagu qiimeeyo xirfadaha iyo aqoonta ardayda.
Waxaan ku faraxsanahay tilmaanta hal-hal ah ee macallimiinteenu bixiyaan. Waa muhiim in tababarayaasheena si fiican loo tababaray, helaan taageero, iyo waxbarasho sii wadata si ay nooga caawiso gaarista himiladeenna. Maaddaama barayaasha cusubi ku biirayaan ALC, waxaan sii wadnaa inaan ku dadaalno sidii aan u bixin lahayn tababar dhammaystiran.
Wuxuu ku noqday kalsooni badan xirfaddiisa Ingiriisiga wuxuuna hadda la hadlayaa dadka ka baxsan qoyskiisa.
Waxay ku bilaabatay ALC kadib markii ninkeedu dhintay. Waxay baraneysey Ingiriisiga iyo xirfadaha aasaasiga ah ee dhaqaalaha sida miisaamidda buugga jeegga iyo buuxinta foomamka.
Kaqaybqaatay waraysigooda shaqo ee ugu horreeyay oo loo shaqaaleysiiyay jagada!